LG V60 ThinQ 5G bụ gọọmentị: Snapdragon 865 na Dual Screen | Gam akporosis
LG ike LG enen mmalite nke ọhụrụ flagship, na V60 ThinQ 5G. O doro anya na ọ bụ otu n'ime ekwentị ndị a na-atụ anya ya, ha niile gachara ọtụtụ ọnya, gụnyere nke ahụ ga-abịa na ihuenyo abụọ na mbụ sụgharịrị ihe oyiyi tinyere àgwà ya.
Ugbu a, onye nrụpụta ahụ kpebiri iwere usoro ahụ ma gosipụta ya na ọha mmadụ, bụrụ otu n'ime njedebe dị ike ịbịa na Snapdragon 865. CPU dị ike na-abịa na modem X55 nke na-enye njikọ 5G, yana mmụba dị elu mmWave na sub- 6GHz na mkpuchi ka mma.
1 Njirimara nke LG V60 ThinQ 5G
Njirimara nke LG V60 ThinQ 5G
Ọ na-amalite site na-arịgo ihuenyo dị mkpa 6,8-inch OLED FHD +, nke a nwere akụkụ dị elu nke 20.5: 9. Ọdịda nke mmiri ahụ bụ otu echiche na V50S, n'ime ya ị nwere ike ịhụ igwefoto selfie nke naanị 10 megapixels, n'otu ihuenyo ahụ na-etinye onye na-agụ akara mkpịsị aka ma nwee nchedo Gorilla Glass 5.
Ugbua na azụ ọ kpebiri itinye isi ihe mmetụta nke 1 / 1.7 ″ nke megapix 64 na OIS na igwefoto 13 MP nke nwere mbara igwe nke nlele nke 117 degrees, ọ na-esonyere ya na ToF sensor. Na LG V60 ThinQ 5G Ọ nwere ike idekọ vidiyo 8K na nkwado maka HDR10 + na usoro ntuziaka.
Snapdragon 865 na ngụkọta nke 8 GB nke Ram na nchekwa nke 128 GB nke anyị nwere ike ịgbasa site na ịnwe ụdị oghere MicroSD. V60 ThinQ bụ IP68 uzuzu na mmiri na-eguzogide ọgwụ ma zute MIL-STD 810G.
Sistemụ arụmọrụ bụ gam akporo 10 na LG UX 9.0, o nwere igodo inyeaka Google n'akụkụ aka ekpe, ọ na-abịa na 32-bit Quad DAC, stereo ọkà okwu na nhazi 4-microphone. Batrị bụ 5.000 mAh nke na-akwado Ndenye Ntanye 4+ na ikuku na-akwụ ụgwọ. Ekwentị ahụ na-akwadokwa ọkọlọtọ njikọta Wi-Fi 6 kachasị ọhụrụ.
LG V60 ThinQ 5G na-agbakwunye panel OLED FHD + 6.8-inch nwere oghere 360 ​​Freestop, nke ọ dị mkpa ịkọ banyere ngosi ngosi ngosi nke anụ ọhịa 2.1 nke nwere arụmọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile, enwere ike ijikọ ya na ọdụ USB-C, na-enweghị ike ya.
El V60 ThinQ 5G na-abịa ọnwa na-abịa na acha anụnụ anụnụ na ọcha, a ga-enwe ụdị abụọ, otu nke 8/128 na ọzọ nke 8/256 GB. O gosiputala ego nke nhazi abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG V60 ThinQ 5G bụ gọọmentị: Snapdragon 865 na ngosi ihuenyo abụọ